Ogaden News Agency (ONA) – C/raxmaan Bootaan oo ku maqan sidii looga bartay gumaysiga : marka hore sumcada ka dil deedna gawrac – Dr. Maxamud Macallin
C/raxmaan Bootaan oo ku maqan sidii looga bartay gumaysiga : marka hore sumcada ka dil deedna gawrac – Dr. Maxamud Macallin
Posted by ONA Admin	/ November 3, 2012
Cabdiraxmaan Bootaan wuxuu ahaa qoraagii webabka wayaanaha ee EEGA.COM, Cakaaranews iyo Xogogaalonline. Dr. Maxamud Macallin oo Jigjiga nooga soo diray warkan ayaa ku bilaabay, inta aanan mawduucaa dulucdiisa galin ayaan hordhac yar ayaan ku bidhaamin dareenka shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ee gudaha, gaar ahaan intii uu joogsaday wadahadalkii la sheegay inuu ka socday Nairobi, taasoo dadweynaha gudaha ay aad u soo dhaweeyeen uguna diirsadeen inay jabhadda ku adkaysato mawqifkeeda.
Dadweynaha Somalida Ogadenya waa shacab taariikh leh caalamkana laga yaqaano waana shacab u halgamaya xoriyadooda iyadoo ay dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jiraa ay dagta qoriga u saarteen hadh iyo habeena u taaganyihiin sidii ay dhulkooda hooyo u soo dhicin lahaayeen.
Taniyo wakhtigii sayid Maxamed Cabdille Xasan diiday inuu u hogaansamo gumaysigii isu-bahaystay ilaa maanta waxaa meelwalba ka socda gadood qarsoon ama dagaal gobonimo doon. Waxaa lala socdaa in ay jireen jirayaana shakhsiyaad dhuuni raac ah oo qadiyada wadankooda ka doorbida dhuunigooda sidaas awgeedna cadawga ugu noqda jaajuusiin iyadoo ay eraygaas macnihiisu tahay in uu ruuxa jaajuuska ahi ku noolyahay hadba cida isaga ugu xigta inuu cadawga u iibgeeyo, arintaasina kama duwana isagoo ruuxaasi dhiigii ehelkiisa cabaya noloshiisuna ku salaysan tahay hilibka walaaladii.
Guumaysiga madaw ee wayaanuhu falalka qaabka daran ee ay wadanka Ogaadeniya ka gaysteen ayaa waxaa kamida inay dhalinyaradii kala dagaalameen waxbarashadii islamarkaana xooga saareen inay dhalinyaradaas shaqo uga dhigaan shaqada kali ah ee ka banaan dalka Ogaadeniya oo ah jaajuusnimo. Taasoo jirta ayay dhalinyarada Ogaadeeniya run ahaantii arintaas ka dhiidhiday oy intoodii badnayd qoryaha wada qaateen kuna biireen halganka socda, wallow ay jiraan shakhsiyaad markoodii horaba damiir laawayaal ahaa ama akhlaaq xumo lagu ogaa oo si jaajuusnimo ahaana ugu shaqeeya cadawga iyadoo mushaharkoodu uu ku xidhan yahay hadba inta ruuxee ay cadawga u soo gacan galiyaan iyagoo masabidanaya.
Inkastoo dadka qurbaha ku dhaqan laga ogsoonyahay gudaha kaalinta ay halganka kaga jiraan iyo dadaalada aan kala go’a lahyn ee ay wadaan iyagoo marwalba wixii hiil iyo hoo ahba ah lagarab taagan halganka ka socda Ogaadeeniya, hadana waxaa jira shakhsiyaad fara kutiris ah oo iyagu noqday dadkii nolasha qurbaha ka dhacay ee aan waxna baran wax shaqo ahna aan ka faa’iidaysan, sidaan dareemayana ahaa qaar inta badan daroogooyinka noocyadiisa kala duwan isku maaweeliya. Kuwaa ayaa iyagana looga furay dalka shaqo jaajuusnimo ah oo ku wajahan dadka qurbaha la jooga ee halganka taageera.
Arimihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah hadaan yarehe taabto, ninka lagu magacaabo C/raxmaan Bootaan ayaa kamid ahaa qurbajoogta degan wadanka Maraykanka oo dhawrkii bilood ee u danbaysay joogay magaalada jigjiga isaga oo intaas ka daba wareegayay sidii boos jaajuusnimo loogu qori lahaa. Waxaa kale oo uu Cabdi raxmaan ka mid ahaa qoraaga cakaaranews iyo website kii xidhmay ee la odhan jiray eegga.com. Wax uu Cabdiraxmaan Bootaan mudo cadawga u shaqeeyo kol uu wax qoro iyo kol uu wax jaajuusaba waxa uu dhawaan wadanka Maraykanka u raacay kii isaga xukumay oo lagu magacaabo Khadar dheere. Waxyaabaha layaabka leh ayaa waxaa ka mid ahaa inuu Bootaan xidhnaa dharkii Hawaarinta markay Maraykanka joogeen isaga iyo Khadar dheeraba, iyagoo sumcad iyo waji kaga raadsanayay sirdoonka guumaysiga Itoobiya kuna rajo waynaa markay soo noqdaan in la odhan doono waa wiilashii geesiyiinta ahaa ee Maraykanka ku dhex xidhay dharkii Hawaarinta. Waxayse arintaasi isu badashay dhaqankii cadawga lagu yaqaanay ee ahaa marka hore sumcada ka dil marka danbana gawrac. Cabdiraxmaan Bootaan wuxuu ku xidhan yahay jeelka Hawaarinta ee ku yaala Jigjiga wuxuuna dhaqaa weelasha Hawaarinta, intaasna waxaa u dheer garaacitaan joogto ah.
Haddaba waxaan waydiin lahaa shakhsiyaadka qurbaha ku nool ee wali cadawga rajo kasugaya inuu maankoodu dhan yahay iyo inkale? Inkastoo aysan ahayn ba in arintaas lagu mashquulo maadaama ay markoodii horeba ahaayeen uun dad sidooda u kharibnaa. Waxaanse kula dardaarmi lahaa in ruuxii ka agdhaw qof noocaas ahi si uu ilaahay ajir uga hello inuu waaniyo.
Waxaa jira arima kaloo badan oo xiisa leh oon waqti dambe aan soo ururin doono, sababtoo ah baxsadkii dadkii la shaqaynayay Cabdi iley ayaa sii badanaya oon soo xuuraamin doonaa meelaha ay kala aadeen iyo waxay maagan yihiin. Inay halganka socda ku biiri doonaan iyo inay xidhka la gali doonaan cabsi darteed.
Dr Muxumad Macallin/Jigjiga.
Og girl says:
kkkkkkk waan iska ognahy qof an nolashuu kaga dhicin quurbaha oo siifian u cafimad caba ilaan cafimdku waa nolashe guud ahnba inunaa wax kadayn itobiya gaabalkedi dhacay oo malin walba dadkedu gajoo iyo injiir u dhiinto ina bada ayku dhintaan baada .waxa weeye balkoogu inu sidi cadiga u hayd kadhigo dameer rarka laga dhiigayoo qawroco inta anka toobadkeeniin ma an heelin gargar cafimaad . thankz dr and ONA